🥇 aza ajụjụ banyere ezé
Ikwu oke: 4.9. Onu ogugu nke otu: 906
aza ajụjụ banyere ezé
Vidiyo nke ndekọ ego nke ezé
Nyere akaụntụ maka ezé
Dentistry na ụlọ ọgwụ eze na-emeghe n'ebe niile. Onye ọ bụla n’ime ha nwere ndị ahịa nke ya na-ahọrọ otu ụlọ ọrụ dabere na ebe ọrụ, ebe obibi, na ọtụtụ ọrụ enyere, amụma ọnụahịa na ọtụtụ ihe ndị ọzọ. Accounting nke ndị ahịa na eze na-arụ ọrụ siri ike ma na-ewe oge. Ọ dị mkpa ọ bụghị naanị iji debe ma melite ozi kọntaktị n'oge kwesịrị ekwesị, kama iji soro akụkọ gbasara ahụike nke ndị ahịa ọ bụla, yana ịchekwa ọtụtụ akwụkwọ nke ịkọ iwu na akụkọ dị n'ime. Ka dentistry na-eto, yana mmepụta usoro nke dentistry, na-aza ajụjụ nke ahịa nke eze na eze na-mma. N'ụzọ dị mma, ọganihu nkà na ụzụ na ahịa ndị ọrụ ahụike na-aga ụkwụ na ụkwụ. Ndị dọkịta ezé nwere ike ugbu a ichefu banyere mkpa ọ dị itinye oge dị ukwuu kwa ụbọchị iji dejupụta ụdị na akwụkwọ dị iche iche, jiri aka na-ejigide kaadị ndị ahịa na akụkọ ahụike ha. Ugbu a akpaghị aka ajụjụ usoro nke dentistry management nwere ike ime ya maka ha. Ruo ugbu a, usoro USU-Soft nke dentistry na-egosi na ọ gosipụtara n'ụzọ kachasị mma. Ọ na-emeri n'ike n'ike ahịa nke ọtụtụ mba. Ndị isi uru nke ngwa nke eze aza ajụjụ tụnyere analogues bụ ya elu àgwà, pụrụ ịdabere na ala nke iji.
A na-akwụkarị ndị nchịkwa na ndị na-enyere ha aka ụgwọ dịka oge ọrụ ha - awa ma ọ bụ mgbanwe. The USU-Soft usoro dentistry aza ajụjụ nwere oge na-abịa atụmatụ na-enye ohere dentistry njikwa na-esochi mgbe ọrụ abịa ọrụ na mgbe ha na-ahapụ ọrụ. Iji mee ka nhazi oge, kpọtụrụ ndị ọrụ na-ahụ maka ọrụ aka anyị. Mgbe ị na-eme nke a, ị ga-ekpebi ozugbo ma ịchọrọ itinye oge na ọmụmụ ihe yana itinye oge. USU-Soft usoro dentistry na-enye gị ohere ịtụle ụdị ọrụ dị iche iche ndị ọrụ na-arụ n'ụzọ dị iche iche. Idobe ihe ndekọ ederede gị na elektrọnik na-eme ka ozi gbasara ọgwụgwọ nke onye ahịa ahụ, nke anakọtara kpamkpam n'otu ebe, anaghị efunahụ ebe ọ bụla, na nsogbu nke ide ederede aka nke ndị dọkịta ezé na-edozi kpamkpam. Ndị dọkịta na-agwọ ọrịa nke onye ahịa ahụ, yana dọkịta ezé eze, nke nwere ike ịnweta kaadị niile, ga-enwe ike ịchọta ngwa ngwa ihe ọmụma ha nwere mmasị na ya.
Dowe akwụkwọ ndekọ aha ndị ahịa. Mgbe ị gwọchara onye ọrịa, dọkịta ahụ mepụtara ndekọ na akụkọ ihe mere eme nke onye ọrịa iji tinye ozi gbasara ọkwa mbụ. Dọkịta kwesịrị ịkọwa ezé ya na ya rụkọrọ ọrụ wee jupụta n'ọhịa 'Nyocha', 'Mkpesa', 'Anamnesis', 'Ebumnuche', 'Ọgwụgwọ', 'Aro' (ọ bụrụ na ọ dị mkpa, ịnwere ike ịgbakwunye ubi ndị ọzọ ma ọ bụ ihichapụ ndị na-enweghị isi). Enwere ike mejupụta akụkọ ikpe ahụ ọ bụghị naanị site na dọkịta ezé, kamakwa onye ọrụ ọ bụla enyerela ikike idezi ndekọ ndị ọzọ na-arụ ọrụ nke ndị ọrụ ndị ọzọ. Site na ndabara, dọkịta na-enweghị ikike a nwere ike ịmepụta ma dezie akụkọ ikpe maka ndị ọrịa ya.
Callkpọ ndị ọrịa bụ akụkụ dị mkpa nke ọrụ onye nlekọta. You nwere ike ide ozi ederede na ozi gbasara nhọpụta na usoro nyocha eze na-ezigara ya otu ndị, wee kpọọ ndị ọrịa ahụ anataghị ozi ahụ. Nke a bụ kemfe mgbe ị na-enweghị oge ịkpọ oku ma ọ bụ dentistry nwere ọtụtụ ndị ọrịa. Pịa na bọtịnụ 'Send SMS' n'elu ndepụta nke ndị ọrịa ma windo mmapụta na-egosi na ndepụta ozi niile echere ka eziga gị. Ga - ahụ ndị ọrịa enwetara ozi ha, ị nwekwara ike zoo ha ka ị hụ ndị ezitebeghị ozi ha. Ọ bụrụ na onye ọrịa egosighi nhọpụta ha, ịnwere ike imeghari ma ọ bụ kagbuo nhọpụta ahụ ozugbo na mmemme nke eze ahụ. Chọta kaadị ndị ọrịa ngwa ngwa ma kenye ha n'ọfịs ndị dọkịta, atụmatụ nke ngwa nyocha bụ ezigbo enyemaka. Pịa aka nri na ụbọchị achọrọ na kalenda ma họrọ 'Bipute ndepụta nhọpụta niile na ụbọchị'. A na-eji nhazi mkpụrụedemede eme ngwa ngwa iji chọta kaadị na faịlụ akwụkwọ aha; A na-eji ahịhịa ndị eze eze iji kesaa kaadị ndị ahụ site n'ọfịs, nke mere na onye ọrịa a kara aka na oge edobere ya bụ n'isi akwụkwọ.
Ọ bụrụ na ịchekwaghị kaadị akwụkwọ na mkpụrụedemede, ịkwesịrị ịgbanwe nhọrọ mbipụta na listi akara akwụkwọ maka ụbọchị ahụ. Iji mee nke a, onye ọrụ nwere ọrụ 'Director' ma ọ bụ onye ọrụ ọzọ nwere ikikere ịgbanwe ndebiri akwụkwọ kwesịrị ịga 'Ntọala', 'ndebiri ndebiri', chọta 'Oge Ọgwụ: Ndị ọrịa nke ndị dọkịta niile maka ụbọchị ahụ' wee gbanwee usoro site aha iji ahazi site na ndekọ ahụike ahụike ma ọ bụ nhọpụta ikpeazụ.
Uru nke usoro USU-Soft nke dentistry na-ekwu maka onwe ha. Ọsọ nke ọrụ na dentistry gị ga-emewanye ngwa ngwa, yana izi ezi nke ọrụ yana ịkparịta ụka na ndị ahịa. Otú ọ dị, nke a abụghị ihe niile. Mgbe ịmalitere iji sistemụ nka eze na-arụ na ị na-arụ, ị ga-enweta nsonaazụ ozugbo. Otú ọ dị, obere oge mgbe nke ahụ gasịrị ị nwere ike iche na ị tụkwasịrị anyị obi iji nweta ụfọdụ ọrụ ndị ọzọ nwere ike ime ka ezé eze gị dịkwuo mma! Iji hụ na arụ ọrụ zuru oke nke usoro mmemme gị, ịchọrọ otu ndị mmemme mmemme pụrụ iche ga-adị njikere inyere gị aka ịza ajụjụ gị mgbe ịchọrọ ya. Dị ka anyị kwurula, a ga-akwụ ụgwọ nyocha maka nlebara anya na mmemme mmemme anyị!
Dentistry na ezé
Akaụntụ na Dentistry
mejuputara ulo akwukwo
aza ụlọ ọgwụ
aza ụlọ ọrụ ezé
aza ezé ezé
Akaụntụ nke ndị ọrịa na ezé
aza ajụjụ maka ọrụ nke dọkịta ezé
ngwa maka dentistry
mmemme kọmputa maka dentistry
ịchịkwa n'ụlọ ọgwụ ezé
nchịkwa nke dentistry
Akpaaka ụlọ ọgwụ
nlekọta ụlọ ọgwụ eze
usoro ulo ogwu eze
dental office control program
eze ọrụ mmemme
ihe ndekọ kọmputa maka dentistry
aha maka dentistry na idebe akụkọ gbasara ahụike
njikwa nke ime na dentistry
na-edebe akụkọ banyere ahụike gbasara ezé
akụrụngwa ngụkọ na dentistry
kaadị ọgwụ maka dentistry
njikwa amịpụta na ezé
Mmemme maka akpaaka dentistry
mmemme nke eze n’etiti eze
Mmemme nke ụlọ ọgwụ eze
atumatu maka eze
Mmemme maka ụlọ ọrụ eze
atumatu maka ndi dibia
mmemme nke ezé
mmemme maka ọgwụgwọ ezé
mmemme maka ịcheta ihe na ezughi oke
Mmemme nke ndị dọkịta ezé
njikwa ike na dentistry
Mpempe akwụkwọ nke ọrụ nyocha ezé
Akụrụngwa maka dentistry
sistemụ maka ọgwụgwọ ezé